AHLUSUNNO iima dhaamto ALSHABAAB! – Bashiir M. Xersi
AHLUSUNNO iima dhaamto ALSHABAAB!
Posted on 18 Jul 2015 9 Sep 2015 by Bashiir M. Xersi	Posted in Qoraallo
Inta aadan cinwaanka ka caroon, inta aadan Wadaaddada dambe igu xugmin [AL ITIXAAD+ALSHABAAB] inta aadan igu dhibsan eray qallafsan, inta aadan kahan adoo is leh; maxaa Wadaaddada is difaacaya ku tusay?! Inta aadan u damqan, dareen aan jirin, bal adoon xuurtaysnayn ila dhiraandhiri inta dhacday, iyo inta dhimman, ee dhawaan soo socota.
Jabhadaha waxaa dhalay kaligi telisnimadii MSBarre (Aabbaha burburka dalka), jabhaduhuna waxay dhaleen qabqablayaashii dagaalka, ee diirtay, diirkii haray iyo daarihii, qabqablayaashuna waxay sii dhaleen mooryaan dubatay intii ay diirteen qabqablayaashu, ayna uga sii daba mareen Wahaabiyo jaadad iyo jidad badan ku timid, Alitixaad, Alictisaam, Maxaakim iyo Alshabaab, oo iyana sabab u noqday curashada Alhsunno.
Sidii Maskii yaa loo xuub dhacsaday, oo mid walba yeeshay falliir iyo duub ka duulay, haddana, wali waa idldaran, doodduna halki ayey taagan tahay, marka tagtada la soo tago, ma laha taagan qumman iyo tiigsi qaabsan.
Ahlusunna intii uu socday dagaalka sokeeye, ee u dhexeeyey beelaha, qayb muuqata kama qaadan, micnaha, lama arag tikniko Ahlusunna ku suntan, oo dagaalka safka hore kaga jirta. Waxay ku sii dhaganaayeen dhaqankoodii hore, ee ahaa Tusbaxa iyo Wardiga, waxaase la dhihi karaa kama marnayn Xijaab xirka mooryaanta beesha, ee dagaalka u gayfan, ama inay Tahliil u tufaan gawaarida gaashaaman ee reerka, loona qoofalay inay u baqoolaan weerarka beel kale! Tani waa mid iska caadi ah, maxaa yeelay, qabqable walbaa, wuxuu leeyahay wadaad uu ka ducaysto, Bunkana uu u dubo!
ALSHABAAB waa dhal feker diimeed xagjir ah, siduu u billowday dagaalka jihaadka iyo ku janno tagga diirka Soomaaliga ah, waxaa si toos ah loo beegsaday xarumaha Ahlusunna, tacaddigaa waxaa gaystay Alshabaab, oo fal kasta oo xun, Alla ugu dhawaada. Waxay burburiyeen dhismayaal, faageen qubuuro ay ku aasnaayeen wadaaddo caan ka ah gayiga. Qabuuro faagiddu waxay ku badan tahay kuna badnayd koofurta fog, gaar ahaan gobollada: Baay, Bakool, Gedo, iyo labada Jubba, meeshaas, oo si joogta ah ay uga dhacaan tacaddiga loo gaysto mayd gu’yaal hore lafa lafo noqday!
Falalkaasi dabcan xanuunkooda ayey leeyihiin, waxayna si toos ah u taabanayeen Ahlusunna, Alshabaab daansi daansi kama ahayn sida muuqata, waxayse ka ahayd qalad sixid iyo toosin diimeed. Diineey xaalkaa ba’! Waase yaabee, diinta faraysa in dadka la dhibo waa tee? Kuma sii jirto hadduuba geeriyooday; in loo duceeyo waxaan ka ahayn ma mudna! Alshabaab dhaqan xumada waa caadadooda, waxayna had iyo jeer ku hawllan yihiin, sidii ay u tirtiri lahaayeen, wixii iyaga ka soo hara, ama aan ku mabda’ ahayn, in la kala diin duwanaado meesha kuma jirto, haddaad rabto Soomaali dhaladaba ahaaw!
Inta dhacdo la warsho, ee ku saabsan sir wadaad ma yara. Run iyo mala’awaal miday tahayba, waxay muujinayaan, sida loogu kadsoomay sheekadii WADAADDU wadeen. Sidoo kale, waxay ka dhigan tahay sida loogu hungoobay XARIGGII ALLE, ee la lahaa, wuxuu unug u yahay, dalwad Soomaali, oo dhisanta. Oo kaalay, inta dunida dawlado ka dhisan, ma XARIG ALLE ayey wada haysan? Maxaa keenay, in maamullo u dhisan yihiin, anaguna aan eber u taagan nahay wali, anagoo waliba isku day samaynay? Maa runta la abbaaro, oo madax geed la dhaca nalaga daayo? Haddii kale, maalin walba NIMAN aan jirin, ayaa na sal kicin doona.
Haddii XARIGGII ALLE xirmi waayey, ee meeshii laga sugayey in lagu diirsado, dhib kalaba abuurmay, aan ka xusi karo AHLUSUNNADA GOBOLLADA DHEXE, oo maalintii ay qoriga qaateen, ee ay iclaansheen inay ALSHABAAB iyo QUWADDA SHARTA ku JIHAADAYAAN, aan la hayan, wax yool ah oo la gaaray, ha noqoto dal xoraysan ama deegaan nabadee, oo dabcan maamul iyo kala dambayni ka jirto.
Ayaan darrada baase ahayd, in JIHAADKII noqday JIDGOOYO cusub. Illeen talo Tigree iyo tab Xabashi ayaa tubteeda la qaadaye. AHLUSNNA ha iska caabinayso falalka gurracan ee ALSHABAABE saw iyaguba ma ahan DHAL AMXAARO? Micnaha, saw ma ahan dhisme Amxaaro samaysay, ee ay walibana fangarayso ciidan ahaan iyo cudud ahaanba? Mise iyaga AWLIYO iyo MALAA’IG ayaa ka garab dagaallanta, oo Xabashi uma baahna? Isma dhihin!
Midda aan qofna dood ka qabin yaa ah; in qofkii ku dhiba, ee dhabbaqo iyo shidaad kaa dayn waaya, aysanna jirin qof kaa celisa, ay xaq tahay in aad u doonatid wax kaa hor istaaga, SHAYDAANBA ha noqdee. Malaha waana midda AHLUSUNNO xoogga saartay, hadday taa ku guulaysatay, maxaa xigay?.
Siddeed sano oo hurmar la’aan ah. Siddeed sano oo nabad la’aan ah. Siddeed sano oo colaad ah. Siddeed sano oo khilaaf ah. Siddeed sano oo magacaaw iyo casilaad ah. Siddeed sano oo shirar ah. Siddeed sano oo ay Aadis iyo Muqdisha u dhexeeyeen. Guusha ay gaareen waa uun inay ka mid noqdeen LIXDII SAXAL ee isku meeray ka arriminta aayaha Soomaaliya, ee ku midaysnaa Roadmapkii 2012dii.
Siddeed sano oo qasaaro iyo macna la’aan ah ayaa na dhaaftay, haddana, bal aan su’aal dhigee, TALA XUMADA AHLUSUNNA MA TOL LA’AAN AYAA U WEHLISA? Dabcan, doodda ugu weyn ee ay soo jeedin doonaan, waa inaysan xoogba u helin, si ay u dhisaan maamul, oo ay ku mashquul sanaayeen safka hore iyo sirta dirirta.
Horta wali ma is weydiisay, waxa GOBOLLADA DHEXE ku gaar yeelay AHLUSUNNA? Maxaa looga waayey gobollada kale, ee dalka? Maxaysan uga abuurmin, gobollada ay dhibka ugu weyn Shabaab u gaysteen? AHLUSUNNA Maxay u dhaafi la’dahay GOBOLLADA DHEXE kaliya, oo u gaari waysay gobollada kale? Weydiimahan, si fiican ugu fiirso, waxaa ku jirta, sirta ugu adag, oo ay ugu egyihiin GOBOLLADA DHEXE!
Sida loo kala guuray, ee kala geeddi loo noqday, ayaa loo kala degay, degid deegaan iyo mid dareenba. Haddana meelaha aan wali degin waxaa ugu horreeyaa deegaannada ay ka arrimyaan AHLUSUNNA ee GOBOLLADA DHEXE. Waa inaan is weydiinnaa; waxa keenay arrintan? Waa inaan u helnaa jawaab. Illeen intaa waqtigu waa socdaaye. Maalin walba oo na dhaaftaa dib u soo noqon mayso, haddaan lagu gudan waxqabadkeedee.
Haddaba, beesha Dusmo reeb iyo Guri Ceel, laba mid ayaa looga fadhiyaa, in ay kala doortaan, oo kala ah:
Alla maanta maxaa badan, inta gabar iyo wiil erayo caynkaa ah ama u dhigma leh, ee afka ka dhawraya ama dareen celis ku ah. Abwaan Carroole Kali, waa kii marna lahaa
AHLUSUNNA waxaysan iigu dhaamin ALSHABAAB, oo ay ka siman yihiin, waxaa ka mid ah:
-GAALAYSIINTA, qofkii aan ku aragti ahayn. AHLUSUNNA qofkii aan iyaga ahayn, xitaa haddii uu ASHCARI, AXMEDDIYO ama SAALIXIYO yahay, waa WAHAABI, KHWAARIJ, BIDCI, MOORYAAN, IWM, halka ALSHABAAB dhahaan; MUSHRIK, MURTAD, MUNAAFAQ, CALAMAANI, WIM.
– AWOOD MAROOQSIGA; qodobkan waxay kala siman yihiin musiibadii meliteriga. Waxay ka siman yihin in ay isa soocaan, aysanna oggolayn wadaag iyo wanaag, inaad ka mid noqoto mooyane, eed beyco la gasho ama lagu khaliiifee, xitaa hadii aad ka mid tahay, balse, aad dhaliisho lama shaqayn kartid, waa lagu tuurayaa, xertana lagaa saaraa: “Qofkii nagu fakir ah, ee aan noo soo hijroon, waa gaal murtad ah!” ayaa halhays u ah.
– XOOG KU MAQOONIN, aan gorgortan aqoon, sidii ka dhacaday Dusmo reeb, ee ay duullaan ku qabsadeen, halka SHABABNA saxiibbadood Xisbul Islaan wada qaarijiyeen.
– TALAXUMADA; oo ay kala mid yihiin maamulladii na soo maray, kuwa jooga iyo kuwa iman doona. Talo raac ma ahan ama talo keen. Ma lahan aragti siyaasadeed, feker maamul iyo hannaan dawladnimo.
– SHISHEEYE KU DAABNAANTA, oo AHLUSUNNA waxay ku daaban tahay AMXAARO, TIRGEE iyo XABASI, halka ALSHABAAB ku daaban yihiin ururro xagjir ah iyo dawlado qas ka wada dalka.
–ISBOQRIDDA: oo ALSHABAAB waxay sheegteen AMIIR, halka AHLUSUNNA ka sheegteen MADAXWEYNE, ayna sidaa ku tuureen KHALIIFNIMADII!
-FULINTA DANO BEELO GAAR AH iyo in dadka loo xoogsheegto, afduubna lagu haysto deegaanno beeleed. Had iyo jeer, waxay 2duba ka faa’iidaystaan isdiidka qabiillada iyo jilibyada wada dhashay, oo waxay abuuraan colaadaha beelaha, iyagoo u kala xagliya, si ay u sii jiraan! Maxaa yeelay, jawi cakiran kaliya, ayaa jiritaankoodu ku xiran, sida in beelaha qaar heshiisyo lala gaaro, kuwo kalena la fogeeyo.
– MUSLIN GUMAADKA iyo QIXINTA MARRASTA. Ha isdhihin, SUNNO yey gumaadday! Oo waa aragtidii EVOLUTION ee Darwin, oo waa la xuubdhacsanayaa, shaarkana waa la badalayanayaa. SUNNO, hadday heli leheed awoodda SHABAAB oo kale, hubaal inay gaysan leheed gumaadkooda oo kale.
Waxay ka siman yihiin habka ay wax u gumaadaan iyo agabka ay wax ku gumaadaan, haddii ay ahaan lahayd dilka iyo qarxinta, masaafurinta iyo raacdaynta intaan ku fakir ahayn. Dad badan ayaa rumaysan, in qarixii 2009kii ka dhacay Caasimadda Dusmo reeb, oo ay hadda xoogga ku haystaan SUNNO, ee lagu duugay maamulkii loo dhisi lahaa, ayna ku geeriyoodeen Xilshibaanno uu ka mid ahaa Seeraar, uuna dhaawac culus ka soo gaaray Danjire Axmad Cabsidalaan inay ku lug lahaayeen ALSUNNO, haba jireen gacmo shishe, oo adeegsatay, oo ajnabi iyo Soomaali lehe ama filin SHABAABE!
– AQOON DARRIDA DUNIDA; 2duba waa macallimiin dugsi, oo ugu badni ah arday cilmiga sharciga ah soo bawsaday, oon heer ka gaarin, oo iska fogeeya dadka cilmiga maaddiga ku caawin lahaa.
– SHEEEKHNIMO SHEEGASHADA: doqon kasta, oo ka mid ah 2daa koox, waxaa loogu yaree Sheekh, xitaa haddii uusan 3 Juz Quraanka ka aqoon!
– XAGJIRMADA FAKIRKA: iyo mayal adaygga indha la’aanta ah, waxayna moodaan in JAGO ama XUKUN uusan mudnayn qofaan jamacadooda ama fakirkooda haysan!
– DA’YARTA oo ay isticmalan hurinta dabka iyo dirirrada. Inta badan waxay ku awrkacsadaan juhulada, sidaa darteed, way adagtahay in xitaa lala hadlo, oo xaldhaxaad ah lala gaaro.
– HORMARKA NACAYBKA: 2duba waxay necebyihiin isbadalka iyo hormarka nolosha qaybaheeda kala duwan.
Siddeed sano ka dib, DEEGAANKA GOBOLLADA DHEXE yaa taladiisa gacanta ku haya? Haddii qorshe daba dheeraado, wuxuu keenaa daldaloollo badan, sidaa awgeed, kan AHLUSUNNA isagaaba markii hore iska daldaloolaye, maxaa yeelay, haddaad AL uga gabbanayso AL kale inaadan meel dheer gaarayn way muuqataa. Waxaan uga jeedaa, caqli ahaan WADAAD waa WADAAD, ee waxay ahayd in WADAADDADA SUBAGLAYDA ah, aan loo dayn kaaligood maamulka deegaanka. Ma ahan inaysan wax ku lahayn ama loo diidayo, ee waa iyaguba inaysan ka aragti gaddisnayn kuwa ay iska caabbinayeen dhanka maamulka iyo awood qaybsiga.
5 thoughts on “AHLUSUNNO iima dhaamto ALSHABAAB!”
20 Jul 2015 at 7:51 am	 Reply
Caburinta ra’yiga waxtarka leh ee qofka, WAXAY KEENTAA BANJARIN KARTIDA IYO HAL-ABUURKA wanagsan ee laga heli lahaa qofkaas.
Pingback: GALMUDUG iyo Yuusuf Garaad Q2AAD | Bashiir M. Xersi
Pingback: GALMUDUG iyo Yuusuf Garaad Q2AAD | YoobsanNews.com
Pingback: GALMUDUG iyo Yuusuf Garaad Q2AAD